RAHARAHA HAFARI MALAGASY : Nivoaka omaly ny didim-pitsarana, afaka noho ny fisalasalana i Jean Nirina
Afaka noho ny fisalasalana tamin’ilay raharaha nahavoasaringotra azy ny filohan’ny Hafari Malagasy, Jean Nirina Rafanomezantsoa. 9 mai 2019
Omaly no nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika an’ity raharaha ity ary fantatra tamin’izany fa afaka tamin’ilay raharaha niampangana azy izay nangatahan’ny mpitory onitra 60 tapitrisa ariary taminy ny lehilahy. Raha tsiahivina dia notorian’ny teratany karana iray mahakasika ny kianjan’Anosizato ny lehilahy. Rehefa raikitra ny ampamoaka mahakasika ity raharaha ity dia nambaran’ilay karana nitory azy fa nandrahona olona iray tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina iray ny lehilahy ka nidoboka am-ponja vonjimaika rehefa avy nosamborina teny Itaosy.
Tsy nionona tamin’ny fitoriana fotsiny anefa ilay karana mpitory fa mbola nangataka onitra 60 tapitrisa ariary tamin’ity filohan’ny Hafari Malagasy ity ihany avy eo. Vantany vao nivoaka ity didim-pitsarana ity dia nanentana sy nisaotra ny Fitsarana ingahy Jean Nirina Rafanomezantsoa ary nanambara fa mbola hijoro hatrany ka tsy hanaiky ny tsindrihazolena ataon’ireo tsy maty manota eto amin’ny firenena.